Tuur Soosaarayaasha Shaaha Macdanta Birta ah - Shiinaha Tuujiya Qaybiyeyaasha & Shaaha Macdanta Birta
shaaha birta loo tuuro
Shaaha macdanta birta lagu rido Ka mid ah shaaha shaaha badan ee summadaysan, caddaan, jilicsan oo dhalaalaya, ayaa lala barbardhigi karaa shaybaarada faleebada; lagu qurxiyo mesh ama mesh midab leh, heerkuna wuu cad yahay, oo leh dareen farshaxanimo oo madax adag; qaab fudud, qaab u gaar ah durbaannada shaaha u eg iyo koobabka shaaha ee baalka loo yaqaan 'butterfly'; waxay door ka ciyaari kartaa ilaalinta kuleylka, waana sahlan tahay in la qaado, waxaana loo isticmaali karaa in lagu rito shaaha, shaaha la dhigo saxanka dhaldhalaalka midabka leh, dad badan oo shaah ah ayaa soo dhaweynaya. Si kastaba ha noqotee, shaaha dhaldhalaalka ayaa dhigaya fas kala wareejinta kuleylka ...
Qashin shaaha birta Qiyaas ahaan Boqortooyada Yuan, tiknoolajiyada dhaldhalaalka ah waxay bilaabeen inay ku faafaan Shiinaha. Cuntada shaaha ee loo yaqaan 'cloisonne enameled set' waxaa la abuuray xilligii Jingtai ee boqortooyadii Ming (1450-456), oo lagu magacaabi karo "farshaxan gacmeed dhaldhalaalaya". Intii lagu gudajiray xukunkii Emperor Qianlong ee Qing Dynasty (1736-1795), dhaldhalaalka cloisonne wuxuu bilaabay inuu ka faafo qasriga boqortooyada una gudbiyo dadka. Waa la dhihi karaa tani waa bilowga warshadaha dhaldhalaalka Shiinaha. Horraantii qarnigii 20aad, dhaldhalaalka t ...
Shaaha birta ah ee loo yaqaan 'Cast iron tea' oo la sumeeyey 1800ML Qiyaastii Boqortooyadii Yuan, tiknoolajiyada dhaldhalaalka ah ayaa bilaabay inay ku faafto Shiinaha. Cuntada shaaha ee loo yaqaan 'cloisonne enameled set' waxaa la abuuray xilligii Jingtai ee boqortooyadii Ming (1450-456), oo lagu magacaabi karo "farshaxan gacmeed dhaldhalaalaya". Intii lagu gudajiray xukunkii Emperor Qianlong ee Qing Dynasty (1736-1795), dhaldhalaalka cloisonne wuxuu bilaabay inuu ka faafo qasriga boqortooyada una gudbiyo dadka. Waa la dhihi karaa tani waa bilowga warshadaha dhaldhalaalka Shiinaha. Horaantii 20-aad c ...
Shaaha birta ah ee loo yaqaan 'Cast iron tea' oo la sumeeyey 1800ML Masar hore ayaa asalka u ah dhaldhalaalka, markii dambena lagu soo kordhiyey Yurub. Dhaldhalaalka birta loo yaqaan 'cast cast enamel maanta' wuxuu ka yimid Jarmalka iyo Austria horaantii qarnigii 19aad. Qiyaastii boqortooyadii Yuan, tiknoolajiyada dhaldhalaalka ah ayaa bilaabay inay ku faafto Shiinaha. Cuntada shaaha ee loo yaqaan 'cloisonne enameled set' waxaa la abuuray xilligii Jingtai ee boqortooyadii Ming (1450-456), oo lagu magacaabi karo "farshaxan gacmeed dhaldhalaalaya". Intii lagu gudajiray xukunkii Emperor Qianlong ee Boqortooyada Qing (173 ...
Shaaha macdanta birta ah ee loo yaqaan '800ML' Qadiimiga Masar waa asalka dhaldhalaalka, markii dambana waxaa lagu soo kordhiyay Yurub. Dhaldhalaalka birta loo yaqaan 'cast cast enamel maanta' wuxuu ka yimid Jarmalka iyo Austria horaantii qarnigii 19aad. Qiyaastii boqortooyadii Yuan, tiknoolajiyada dhaldhalaalka ah ayaa bilaabay inay ku faafto Shiinaha. Cuntada shaaha ee loo yaqaan 'cloisonne enameled set' waxaa la abuuray xilligii Jingtai ee boqortooyadii Ming (1450-456), oo lagu magacaabi karo "farshaxan gacmeed dhaldhalaalaya". Intii lagu jiray boqortooyadii Qianlong ee Boqortooyada Qing (1736 ...
Shaaha birta ah ee birta loo xardhay 500ML